Miyaa la jebiyay sharcigii xaddidayay in hub nukliyeer ah la isu adeegsado? | Hangool News
Miyaa la jebiyay sharcigii xaddidayay in hub nukliyeer ah la isu adeegsado?
March 15, 2019 - Written by Hangool News 1
“Waxaan dhex soconaa dhul ay ka buuxdo miino, mana garanayno halka uu qaraxu ka imaan doono.”
Waa digniin usbuucan ka timid wasiirkii hore ee Arrimaha Dibadda ee Ruushka, Igor Ivanov, taa oo uu ka jeediyay Shirweynihii arrimaha Nukliyeerka ee Carnegie International ee ka dhacay magaalada Washington DC.
Xildhibaankii hore ee ka tirsanaan jiray aqal Senedka isla markaana muddada dheer u dhaqdhaqaaqi jirey xakamaynta hubka, Sam Nunn, ayaa isaguna sidoo kale muujiyay dareen kaa la mid ah. Waxa uu ku dooday in “Haddii Maraykanku, Ruushka iyo Shiinuhu aysan wada shaqeyn, waxa ay arrintan dhibaato ku noqon doontaa carruurtayada iyo kuwa ay sii dhaleen.”
Waxa uu ku booriyay hoggaamiyeyaasha adduunka haatan ka talinaya in ay ku daydaan qaabka qaabkii ay arrintan u wajaheen madaxweynihii hore ee Mareykanka, Ronald Reagan iyo dhiggiisii Ruushka, Mikhail Gorbachev, dhamaadkii gagaalkii Qaboobaa, iyadoo ay tahay in ay muujiyaan in cidna aysan ku guuleysanayn dagaal dhanka Nukliyeerka ahi, sidaa awgeedna aanan marnaba la isku dayin.
Reagan ayaa ku haminayay in uu sameysto hannaanka difaaca gantaalada oo xabbadu aysan karin, basle wuxuu sidoo kale ku sigtay in uu heshiis lagu baabi’inayo hubka Nukliyeerka uu la saxiixdo dhiggiisa dalka Ruushka Gorbachev.
Dedaaladii uu muujiyay ayaa horseeday heshiiskii ugu horreeyay ee la baxay Start Treaty, kaasi oo yareeyay keydka hubka ee labadani quwadood eek u hubeysnaa hubka nukliyeerka ah.
Maanta mustaqbalka heshiiskii kaa ka dambeeyay – oo loo yaqaan “New Start Agreement” – ayaa shaki ku jira. Waxaa burburay heshiiskii gantaalada riddada dhexe ee Nukliyeerka (INF) ka dib markii uu Maraykanka ka baxay ka dibna Russia uu maray isla waddadaasi.
Madaxwaynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ku adkeysanaya in Ruushku uu sanado badan ka hor jabiyay heshiiskaasi, haatanna uu sameystay gantaallo lid ku ah heshiiskasi.
Madaxwaynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa eedeyntaasi beeniyay, balse saaxiibada Mareykanka ee Nato ayaa taageeray eedeyntaasi Washington.
Si kastaba ha ahaatee, xulufada Mareykanka ayaan ku faraxsanayn qaabka madaxweyne Trump uu u wajahayo arrimaha caalamka, sida ka muuqatay shirkaasi.
Danjiraha Jarmalka u fadhiya Maraykanka, Emily Haber, ayaa sheegtay in uu “nabaad guur ku dhacay nidaamka ku dhaqanka sharciga” kaasi oo horey u hagayay caalamka.
Waxay farta ku fiiqday isticmaalka xayiraadaha dhaqaale ee lagu ciqaabayo waddan kale halkii waddankaasi la toosin lahaa, hadalkaa oo u muuqday in ay ula jeeday xayiraadihii uu Mareykanka ku soo rogay dalka Ruushka ka dib markii uu qabsaday gobolka Crimea sanadkii 2015-kii.
Arrintani ma ahan mid sahlan.
Haber ma aysan cambaareynin maamulka madaxweyne Trump, inkastoo ay jirto xiisad cad oo u dhexeysa madaxweynaha Maraykanka iyo hoggaamiyaha jarmalka Angela Merkel.
Waxa ay sidoo kale tusale u soo qaadatay daandaansiyo dhawr ah oo uu ku kacay madaxweyne Putin, kuwaasi oo ay sheegtay in ay lumiyeen kalsoonidii iyo hannaankii diblomaasiyadda.
Inta badan dadkii ka hadlay shirkaasi ayaa ku nuux-nuuxsaday in aysan ahayn kaliya in ururadii hore ee xakameynta hubka ay burburayaan; ama in ay sii kordheyso xiisadda udhaxeysa quwadaha caalamka ee ku hubeysan hubka Nukliyeerka.
Ma ahan xitaa oo kaliya caqabadaha ka imaanaya Shiinaha ama loolanka xoogga ee u dhaxeeya Hindiya iyo Pakistan.
Waxay ka baqayaan in arrin cusub oo khatar ah ay dunidu soo foodsaarto.
Maadaama hadda ay burburayaan niyaamyadii hore ee lagu xakameyn jiray hubka, waxaa soo baxaya caqabado hor leh oo casri ah oo tiknoolajiyadeed, kuwaasi oo ay suurtagal tahay in ay xagal daaciyaan hannaanka digniinta ee gantaalada.
Shirkani ma ahayn shir loogu talagalay dhiiri gelin balse wuxuu ahaa mid farriinta ka imaaneysa ay tahay mid aad looga niyad jabo.
Haddaba iska illaaw suurtagalnimada in dib loo soo nooleeyo heshiiskii INF, si Shiinaha loogu soo darto.
Andrea Thompson, oo ah kaaliyaha xoghayaha arrimaha dibadda ee xakamaynta hubka ayaa cadeeyay in Shiinahu uusan daneynayn heshiiskaasi.
Haddba suurtagal ma tahay in la badbaadiyo heshiiska “The New Start treaty” – oo ah midka kaliya ee lagu baabi’in karayo hubka Nukliyeerka ee waddamada Mareykanka iyo Ruushka?
Waqtigu waa uu yar yahay. Waxa uu heshiiskaasi dhacayaa horraanta bisha Febraayo ee sanadka 2021. Inkasta madaxda sar-sare ee Maraykanka iyo Ruushka ay qireen muhiimadda heshiiskani, haddana ma aysan jirin cid muujisay in ay muhiim tahay in wakhtiga loo kordhiyo.
Ma aysan ahayn in la laalo heshiiskaasi “The New Start”. Hase yeeshee waxaa laga yaabaa in xiisadda u dhaxeysa Mareykanka iyo Ruushku ay galaafatay.
Shirkaasi sidoo kale kama soo bixin warka wanaagsan oo ku saabsan heshiiskii dhanka Nukliyeerka ee waddamada Mareykanka iyo Kuuriyada Woqooyi.
Markii uu socday shirkii Hanoi, Trump wuxuu gorgortan wayn la galay xukuumadda Pyongyang.
Hase yeeshee, hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi waxaa kaliya oo uu diyaar u ahaa inuu qayb yar oo ka mid ah barnaamijkiisa nukliyarka baabi’iyo, isaga oo dalbanayay in si buuxda xayiraadaha dhaqaale looga qaado. Trump go’aansaday inuu iska tago iayada oo aan arrimahaasi laga heshiin.
Haddii heshiisyada xaddidaya hubka qadiimiga ahi ay burburayaan, sidee ayaa la isku raaci doonaa sharciyada lagu xakamaynayo kuwa cusub?
Dhamaadkii dagaalkii qaboobaa ayaa Maraykanka iyo Midowgii Soofiyeedka waxa ay isugu hanjabeen in ay isu adeegsan doonaan hubka Nukliyeerka.
Arrintaasi ayaa markii dambe sababtay in heshiisyo laga gaaro xakameynta hubkaasi balse haatan waxaa muuqaneysa in la laalay dhammaan heshiisyadasi.